what, when, why: गाउखाने कथाको सङग्रह
गाउखाने कथाको सङग्रह
१ बाबु एउटै भए पनि पाँच भाई छोरा
ति पाँचको घर पाँच तर एक द्वार - के हो ?
२ प्राए जसो सबै पाल्छन काटी खान हुन्न
नयाँ मानिस कोही आए सिधै पस्न दिन्न - के हो ?
३ उसले बोल्दा सबै सुती सुती सुन्छन कुरा
सबै बुझ्न सके मानिस ज्ञानी हुन्छन - के हो ?
४ भुँडी भरी झोल हाली अनी हावा भर्छन
मुखबाट बान्ता आए सलाई कोरी झोस्छन - के हो ?
५ प्राए हुन्छ जङलमा घर द्वार छैन एकै छिन
चुप लागि बस्ने पनि होइन - के हो ?
६ हात खुट्टा केही छैन जता सुकै जान्छ
बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ - के हो ?
७ जती धेरै भए पनि धेरै कहिले हुन्न
त्यसको लोभले मानिसलाई कहिले छोड्ने छैन के हो ?
८ मन चोर्ने मायालु ति राती राती आउछिन
उज्यालो हुन नपाउदै कुन्नी कता जान्छिन के हो ?
९ कम्मर कसी काम गर्ने हाम्री घरकी नानी
जति पछि हुँदै गयो उति हुन्छिन सानी - के हो ?
१० सानो सानो ओडारमा सेता भेडा बाख्रा
पाको उमेर भए पछि लाग्छन एत्र तत्र - के हो ?
(उत्तर: १ - हत्केला , २ - कुकुर , ३ - रेडियो , ४ - स्टोभ बालेको , ५ - बाँदर , ६ - चिठ्ठी , ७ - धन सम्पत्ति , ८ - सपना , ९ - कुचो , १० - दात )